9 nke 10 nke ndị njem ga-enwe ahụ iru ala site na iji paspọtụ ahụike dijitalụ
Home » Na-agbasa News Travel » 9 nke 10 nke ndị njem ga-enwe ahụ iru ala site na iji paspọtụ ahụike dijitalụ
Na-agbasa News Travel • Business Travel Akụkọ • etn • Akụkọ Gọọmentị na Ọha na-ahụ Maka Ọha na Ọha • Akụkọ Ahụike • Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa • iwughachi • Onsrụ Ọrụ Dịịrị Tourism News • Tourism • Akụkọ Njem Nleta • Akụkọ gbọ njem • Travel • Akụkọ Teknụzụ Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ọmụmụ ihe ahụ gosipụtara mkpa ọ dị ịghọta nchegbu ndị njem na-eche banyere ihe nzuzo, ịdị mfe nke iji na nchekwa
41% nke ndị njem nwere mmasị ide akwụkwọ njem mba ụwa n'ime izu isii nke mgbochi ebuli
Paspọtụ ahụike dijitalụ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa iji mepee njem
74% nke ndị njem nyochara ga-adị njikere ịchekwa data ahụike ha na elektrọnik
Ọmụmụ ihe ọhụrụ nyere ozi ọma na-agba ume maka ụlọ ọrụ ahụ, yana 41% nke ndị njem na-achọ ịde akwụkwọ njem mba ofesi n'ime izu isii nke mgbochi ebuli.
Ọmụmụ ihe ahụ gosipụtara mkpa ọ dị ịghọta nchegbu ndị njem na-eche gbasara nzuzo, ịdị mfe nke iji na nchekwa.
Dika gọọmentị na ụlọ ọrụ njem na-enyocha uru nke paspọtụ ahụike dijitalụ, ozi sitere n'aka ndị njem doro anya: paspọtụ ahụike dijitalụ nwere ike ịbụ ihe dị mkpa iji mepee njem. Nnyocha ahụ chọpụtara na ihe karịrị 9 n'ime 10 (91%) ndị njem nyochara kwuru na ha ga-enwe ahụ iru ala n'iji paspọtụ ahụike dijitalụ maka njem n'ọdịnihu.
Nnyocha a na-agba ume na-enye ihe mkpali iji mee ngwangwa atụmatụ maka akwụkwọ ikike paspọtụ dijitalụ nke ga-enyere aka ilebara nchegbu ndị njem anya. Ọmụmụ ihe ahụ nyere ozi ọma ọzọ maka ụlọ ọrụ ahụ dịka ihe karịrị 2 n'ime ndị njem 5 (41%) kwuru na ha ga-ede akwụkwọ njem mba ofesi n'ime izu isii nke mgbochi ebuli, na-egosi na agụụ ịga njem ka dị elu.
Nnyocha nke ndị njem 9,055 na France, Spain, Germany, India, UAE, Russia, Singapore, UK na US nwekwara ndetu nke ịdọ aka ná ntị maka ụlọ ọrụ ahụ karịa ndị njem 9 n'ime 10 (93%) nwere ụfọdụ nchegbu gbasara etu data ahụike ha siri dị. n'ihi na a ga-echekwa njem.
Mgbe a jụrụ gị banyere ịdị mkpa ịchekwa na ịkekọrịta data ahụike dijitalụ, nsonaazụ nyocha gosiri:
· Naanị ụzọ atọ (74%) nke ndị njem nyochara ga-adị njikere ịchekwa data ahụike ha na elektrọnik ma ọ bụrụ na ọ nyere ha aka ịgafe n'ọdụ ụgbọ elu ngwa ngwa na obere mmekọrịta ihu na ihu
· N'ime 7 na 10 (72%) ndị njem nyochara ga-adị njikere ịchekwa data ahụike ha na elektrọnik ma ọ bụrụ na enyere ha aka ịga ebe ndị ọzọ.
· 68% nke ndị njem kwetara na ha nwere ike ịkekọrịta data ahụike ha ma ọ bụrụ na ụgbọ elu ha na-agakarị na-enye ụzọ iji chekwaa data ahụike njem ha.
Ọ bụ ezie na ịnabata ịkekọrịta data dị elu, ụlọ ọrụ njem kwesịrị ịtụle nchegbu ndị njem gbasara iji data eme ihe. Isi ihe atọ ndị njem na-eche bụ:
· Egwu nchekwa yana iji nweta ozi nkeonwe (38%)
· Nzuzo nzuzo gbasara ihe gbasara ahụike chọrọ ka ekekọrịta (35%)
· Enweghị nghọta na ịchịkwa ebe a na-akọrọ data ahụ (30%).
Nnyocha ahụ chọpụtakwara ihe ngwọta nwere ike belata nchegbu gbasara data ahụike dijitalụ na njem n'ọdịnihu na nsonaazụ gosiri:
· 42% nke ndị njem kwuru na ngwa njem nke enwere ike iji gafee njem ahụ dum ga-eme ka ahụmịhe njem ha dum meziwanye ma mee ka obi sie ha ike na ozi ha niile dị n'otu ebe.
· 41% nke ndị njem kwenyere na ngwa njem ga-ebelata nrụgide ha na njem
· 62% nke ndị njem ga-enwe ike iji ngwa iji chekwaa data ahụike ha ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ njem jikọrọ aka na ụlọ ọrụ ahụike tụkwasịrị obi.
Nnyocha ahụ bụ nke abụọ n'ime usoro nyocha nke ndị njem, ebe Amadeus na-enyocha nlezianya mgbe niile banyere echiche ndị njem na nchegbu iji nyere ụlọ ọrụ aka ịmaliteghachi njem n'ụzọ kachasị dị irè. Nyocha 2020 Rethink Travel gosipụtara otú teknụzụ nwere ike isi nyere aka mee ka ndị njem nwee obi ike na Amadeus gaghachiri ajụjụ a iji hụ ka ntụkwasị obi ndị njem gbanwere kemgbe Septemba 2020. 91% nke ndị njem ugbu a na-ekwu na teknụzụ ga-eme ka obi sie ha ike njem, mmụba site na 84% na Septemba 2020.
Mgbe a jụrụ gị teknụzụ ga - eme ka obi sie ike ịme njem na ọnwa 12 na - esote, a gosipụtara azịza ekwentị dịka nhọrọ kachasị ewu ewu, yana teknụzụ atọ kachasị elu gụnyere:
· Ngwa mkpanaka nke na-enye ọkwa na ọkwa na njem (45%)
· Kpọtụrụ ekwentị na-akwụghị ụgwọ (eg, Apple ma ọ bụ Google Pay, Paypal, Venmo) (44%)
· Ibanye n’ụgbọ igwe (dịka, itinye ngafe na ekwentị gị) (43%)
Obi abụọ adịghị ya na COVID-19 ga-anọgide na-akpụzi ụzọ anyị si eme njem maka ọnwa ndị dị n'ihu, dịka ọ na-emetụta ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ndụ anyị. Agbanyeghị, ejighị n'aka, nyocha dị ka nke a na-eme ka nchekwube m sie ike na anyị ga-alaghachi njem karịa nke mbụ. Mmekọrịta gafee gọọmentị na ụlọ ọrụ anyị bụ isi ihe iji bido ịmalite njem, ka anyị na-atụ anya na atụmanya ndị njem gosipụtara na nyochaghachi ahụike ahụike dijitalụ a, na-ebunye teknụzụ ziri ezi iji mee ka njem ejikọrọ na enweghị njikọ.
Ọmụmụ ihe a na-egosipụtakwara otu ọrụ dị mkpa nke teknụzụ ga-arụ na iwughachi njem. Anyị ahụla mgbanwe kemgbe nyocha ikpeazụ anyị, ebe ndị njem na-elekwasị anya ugbu a na teknụzụ mkpanaka na enweghị aka, akụkụ ndị dị mkpa ga-eme ka ntụkwasị obi onye njem sikwuo ike. Ọ dịkwa oke mkpa ịhụ na ndị njem na-emeghe paspọtụ ahụike dijitalụ na ịkekọrịta data ha ka ha na-agagharị na njem ahụ, ozugbo nchekwa dị mma dị. Na Amadeus, anyị na-agba mbọ iwughachi ụlọ ọrụ ka mma, yana ndị ahịa anyị na ndị mmekọ.
Kedu ihe ọhụrụ na agwaetiti nke Bahamas na Eprel
HotelApp - Ntugharị Ntugharị Ntugharị Ọhụrụ nke International Travel Awards